ငွေတစ်ရာဘယ်သူယူထားလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ငွေတစ်ရာဘယ်သူယူထားလဲ
Posted by ဂျဲသု on Aug 26, 2011 in Other - Non Channelized | 23 comments
ကျွန်တော်တို.သူငယ်ချင်းသုံးယောက် ထမင်းသွားစားတာ တစ်ပွဲကို ၂၅၀၀ ပေးရပါတယ်။ ပိုက်ဆံရှင်းပြီးတော့ ဆိုင်ရှင်အဒေါ်ကြီးက ဖောက်သည်တွေမို.ဆိုပြီး ၅၀၀ လျှော့ပေးလိုက်ပါတယ် ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို. သုံးယောက်ပေါင်း ၅၀၀ လျှော့လိုက်တာဆိုတော့ လူသုံးယောက် အဝေမတည့်ဖြစ်နေတာနဲ့ တစ်ယောက်တစ်ရာစီ ယူပြီး ပိုတဲ့ ၂၀၀ ကို စားပွဲထိုးလေးကို မုန်.ဖိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ကျွန်တော်တို. ကုန်ကျတာက တစ်ယောက်ကို ၂၄၀၀ နဲ. သုံးယောက်ဆို တော့ ၇၂၀၀ ကျပ်ပါ စားပွဲထိုးလေးကို ပေးလိုက်တာက ၂၀၀ ပါ။ အဲဒီမှာ ပြသနာတက်တာပါပဲ ။ ကျွန်တော်တို.သုံးယောက်ပေါင်း ၇၂၀၀ နဲ. စားပွဲထိုးလေးကိုပေးလိုက်တဲ့ ၂၀၀ ပေါင်းမှ ၇၄၀၀ ပဲရှိသေးတယ်။ ကျန်တဲ့ ၁၀၀ က ဘယ်ပျောက်သွားလဲ မသိတော့ပါဘူး။ ဘယ်သူယူထားလည်းဆိုတာ ကူပြီးစဉ်းစားပေးကြပါဦး။
has written 13 post in this Website..
View all posts by ဂျဲသု →
မူလသုံးယောက်ပေါင်းငွေ = ၇၅၀၀
ဆိုင်ရှင်အားပေးငွေ = ၇၀၀၀
တစ်ဦးချင်းကုန်ကျငွေ = ၂၄၀၀
စားပွဲထိုးပေးငွေ = ၂၀၀
သုံးယောက်ပေါင်း ကုန်ငွေ = ဆိုင်ရှင်အားပေးငွေ + စားပွဲထိုးပေးငွေ = ၇၀၀၀ + ၂၀၀ = ၇၂၀၀
တစ်ဦးချင်းကုန်ကျငွေ x ၃ = သုံးယောက်ပေါင်း ကုန်ငွေ = ၇၂၀၀
မူလသုံးယောက်ပေါင်းငွေ – သုံးယောက်ပေါင်း ကုန်ငွေ = ၇၅၀၀ – ၇၂၀၀ = ၃၀၀
ထို၃၀၀သည် သုံးယောက်တစ်ယောက်ကို ၁၀၀ယူလိုက်၏
“ကျွန်တော်တို. ကုန်ကျတာက တစ်ယောက်ကို ၂၄၀၀ နဲ. သုံးယောက်ဆို တော့ ၇၂၀၀ ကျပ်ပါ စားပွဲထိုးလေးကို ပေးလိုက်တာက ၂၀၀ ပါ။”
တစ်ယောက်ကို ၂၄၀၀ကုန်ကျတဲ့ထဲမှာ စားပွဲထိုးပေးငွေပါပြီးဖြစ်လို့ ထပ်တွက်ရင် ရူးလို့ပဲ
ကျွန်တော်သိချင်တာက ငွေတစ်ရာကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာပဲ သိချင်တာပါ အဲလိုပေါင်းအဲလိုနုတ်ရင်အဲဒီအဖြေတွေရတာတော့လေးတန်းကလေးတောင်သိပါတယ်။ တွက်ကြည့်လို.လိုနေတဲ့ငွေတစ်ရာဘယ်ရောက်နေလဲလို.သိချင်တာပါ ။ခေါင်းစဉ်ကိုကငွေတစ်ရာဘယ်သူ ယူထားလဲလို.မေးတာပါ ။ မမေးတာတွေကိုဖြေတာကမှ ရူးနေလို.ပါ:D
၂ ၄ ၀ ၀ * ၃ =၇ ၂ ၀ ၀ ၂၅၀၀ * ၃ = ၇ ၅ ၀ ၀
၁ ၀ ၀ * ၃ = ၃ ၀ ၀ လျှော့ – ၅ ၀ ၀
၇ ၅ ၀ ၀ ၇ ၀ ၀ ၀
စားပွဲထိုးပေး + ၂ ၀ ၀
၇ ၂ ၀ ၀
ထမင်းဖိုး သင့်ငွေ = 3*2500= 7500
လျှော့ပေးငွေ = 500
ထို့ကြောင့် ထမင်းဖိုးပေးငွေ = 7000
လျှော့ပေးငွေ = 500= တစ်ဦးလျှင် 100 နှင့်3ဦး (1*300)+ စားပွဲထိုးပေး 200
ဘာတွေများ ခေါင်းကိုက်စရာတွေ ပါပါလိမ့်????????????????????
ကျွန်တော်ပြောသလိုတွက်ကြည့်ရင် ပျောက်နေတဲ့တစ်ရာဘယ်သူ.ဆီမှာလဲသိချင်တာပါ ။ ကျွန်တော်တော့ခေါင်းကိုက်နေတုန်းပဲ။ ခုထိအဖြေမှန်မရသေးလို.
၂၃၃၃.၃၃ *၃ = ရ၀၀၀
****၁ ၀ ၀ * ၃=၃၀၀
**စာပွဲထိုး ပေး =၂၀၀
ရ၅၀၀ ရအောင်တွက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ပျောက်နေတဲ့တစ်ရာ ဘယ်ရောက်နေလဲလို.သိချင်တာပါခင်ဗျား
တယောက်ကို ၂၄၀၀ စတွက်ကတည်းကမှားနေတာပါ။ ၅၀၀ ပြန်အမ်း၇င်တယောက်ကို ၂၃၃၃.၃၃ ကျပ် ပဲကျတာပါ။
ဘယ်မှ မရောက်ပါဘူး။စားပြီးခါက စမို့ ပါးစပ်ချဉ်လို့ ကွမ်းဝယ်စားတယ်နေမှာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆေးလိပ်သောက်လိမ့်မယ်။ထင်တာတွေနော်—
ဘယ်လိုကြောင့်အနှတ်တွေပြနေပါလိမ့်။အဖြေက မမှန်ဘူးလား။ခုထိလဲ အဖြေမပေးသေးပါလား။ဘယ်နေ့ မှပြောပြမှာပါလိမ့်။
မကြာမီလာမည်ပေါ့ဗျာ တအားကြီးခက်တာတွေမှမဟုတ်တာ စောစောသိရင်ပျင်းစရာကြီးကို
ပျင်းစရာကြီးး??မဟုတ်သေးပါဘူး။ရှင်တို့ ညီတူမျှတူ တခုခုဝယ်စားတယ်ဟုတ်—အဲလိုမဟုတ်ဘူးလား
ကိုရင်မောင်မှန်ပါတယ် ကျွန်တော်မှားပါတယ် တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်ထားတဲ့ မှန်တယ်ဆိုတဲ့ အဖြေကလည်း ကိုရင်မောင်ဖြေတာကိုပြန်စဉ်းစားမိမှ မှားနေမှန်းသိတာပါ။ ကျွန်တော်ဒီပုစ္ဆာကိုကြားဖူးထားတာကလည်း မေးခွန်းပဲကြားဖူးတာပါ။ တောင်းပန်ပါတယ်။ အဖြေမှန်ဖြေပေးလို.လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပန်ပန်လည်းမှန်ပါတယ်။ သူကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မှန်တယ်လို.ထင်တဲ့အဖြေက မှားနေတာကြောင့် သူကကို သူပြောသလိုပြန်ပြောမိတာပါ
ကုန်ကျတာက တစ်ယောက်ကို ၂၄၀၀ နဲ. သုံးယောက်ဆိုတော့……
စဝယ်စားစဉ်က တစ်ယောက်ကို ၂၅၀၀ လို့ ရေးထားပါတယ်။ အဒေါ်ကြီးလျှော့ပေးတာ တစ်ယောက် ၁၀၀ မဟုတ်ပါဘူး။ ၃ယောက်ပေါင်း ၅၀၀ လျှော့ပေးတာပါ။ အဲဒါကြောင့် တစ်ယောက် ၂၄၀၀ က ဘယ်က ဘယ်လို တွက်ထားတာလဲ မေးခွန်းပိုင်ရှင်ကို ပြန်မေးလိုပါတယ်။
ခက်လိုက်တာနော်…..ပျောက်သွားတဲ့တစ်ရာ မှော်ဆရာဆီက လာယူ.မှော်ဒင်္ဂါးနဲ့ပေးလိုက်မယ်…လူ့ပြည်က ငွေတစ်ရာက အကြွေရှားလို့….
တစ်ရာကိစ္စ စကားများရတာနဲ့တင် ….
အင်တာနက်ဖိုး တစ်ထောင်မက ကုန်နေပြီ…
နောက်တစ်ခါ စိတ်မညစ်ရအောင် …မုန့်ဖိုးလဲ တစ်နေ့ ငွေနှစ်ရာ ပိုပေးမယ်…
ဘယ်ရောက်နေတာ မသိပေမယ့် မနော မယူတာ သေချာပါတယ်ရှင်…